किन टुक्र्याइयो कश्मिर : यसरी गरियो बोल्ड निर्णय ? Darpansansar News
किन टुक्र्याइयो कश्मिर : यसरी गरियो बोल्ड निर्णय ?
एजेन्सी । सन् १९४७ मा भारत विभाजित भइ भारत र पाकिस्तानमा परिणत भएसँगै उत्तरी राज्य कश्मिर पनि दुई टुक्रा भयो ।
राजधानी श्रीनगरसहित आधा भाग भारतको अधीनमा आयो भने केही भाग पाकिस्तानतर्फ पर्‍यो ।
भारतले सन् १९४९ मा जारी गरिएको संविधानमा जम्मु कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दियो ।
त्यही विशेषाधिकारलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले सोमबार खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विशेषाधिकारमात्रै खारेज गरिएको छैन, जम्मु कश्मिरबाट लद्दाखलाई छुट्याएर केन्द्र शासित क्षेत्र बनाइएको छ ।
आइतबार मध्यराति नै ठूलो संख्यामा सशस्त्र फौज कश्मिरमा तैनाथ गरी इन्टरनेट र सन्चारमाध्यममाथिसमेत प्रतिबन्ध लगाएको मोदी सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार दिउँसो भारतीय संसदलाई जम्मु कश्मिरबारे लिइएको निर्णय सुनाएका थिए ।
उनले संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ‘ए’ खारेज गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेस गरे । जुन प्रावधानअन्तर्गत् मुस्लिम बाहुल्य जम्मु कश्मिरले विशेषाधिकारयुक्त स्वायत्त राज्यको मान्यता पाउँदै आएको थियो ।
संविधानको अनुच्छेद ३५ ‘ए’ले कश्मिरमा स्थायी बासिन्दालाई विशेषाधिकार दिएको थियो । उक्त धारामा रक्षा, विदेश मामिला, अर्थ र सन्चारबाहेकका कानुन लागू गर्नुपरेको खन्डमा केन्द्र सरकारले राज्य सरकारको सहमति चाहिने व्यवस्था छ ।
यसअनुसार कश्मिरका स्थायी बासिन्दाबाहेक अरूले कश्मिरमा अचल सम्पति किन्न वा सरकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दैनथे ।
कश्मिरी पुरुषसँग विवाह गरेका बाहिरका महिलालाईसमेत सम्पत्तिको अधिकार दिइँदैनथ्यो । कतिसम्म भने कश्मिरको आफ्नो छुट्टै झन्डासमेत रहेको थियो ।
तर, मोदी सरकारको निर्णणले जम्मु कश्मिरको विशेषाधिकारमात्रै खोसिएको छैन, उक्त राज्यलाई विभाजन गर्दै जम्मु कश्मिर र लद्दाख बनाइनेछ ।
लद्दाख सधैं केन्द्र शासित क्षेत्र रहनेछ भने जम्मु कश्मिरमा पछि विधानसभा गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालका लागि भने जम्मु कश्मिरमा पनि राष्ट्रपति शासनअन्तर्गत् ‘लेफ्टिनेन्ट गभर्नर’ले शासन गर्नेछन् ।
विशेषाधिकार खोसिएसँगै जम्मु कश्मिरका जनताका लागि विशेषखालको आरक्षणको व्यवस्था गरिने पनि मोदी सरकारले घोषणा गरेको छ ।
स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा मोदी सरकारले चालेको यो कदमलाई ‘ऐतिहासिक’ र ‘भयंकर’ भनिएको छ ।
विपक्षी कांग्रेस र कश्मिरका पार्टीहरुले निर्णयको चर्को आलोचना गर्दै मोदी सरकारले ‘संविधानको हत्या’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।
नजरबन्दमा रहेकी जम्मु कश्मिरकी पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले मोदी सरकारको यो निर्णयलाई भारतीय लोकतन्त्रका लागि ‘कालो दिन’ भनेकी छन् ।
तर, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टीलगायतका विपक्षी दलहरुले भने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । भाजपाका सहयात्री दलहरुले खुलेरै स्वागत गरेका छन् ।
भारत र पाकिस्तानबीचको दुश्मनीको मुख्य विषय पनि यही कश्मिर रहँदै आएको छ ।
पाकिस्तान कश्मिरको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाकारुपमा स्थापित गर्ने र राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा जनमतसंग्रह गराउने पक्षमा छ भने भारतले उक्त प्रस्ताव सुन्न पनि चाहँदैन ।
पछिल्लो कदमले मोदी सरकार कश्मिर मामिलामा स्पस्ट रणनीतिका साथ अघि बढ्दैछ भन्ने प्रस्ट छ । तर, यो विषयको स्थायी अवतरण कसरी हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नुचाहिँ हतार हुन्छ ।
भारत सरकारले चालेको कदमको विरोध गर्दै पाकिस्तानले यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा उठाउने चेतावनी दिएपछि भारतले भने त्यसको पक्षमा समर्थन जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल तीव्र बनाएको हो ।
जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी साता विदेशमन्त्री एस जयशंकर चीन जाने बताइएको छ ।
सरकारी निर्णयसँगै विदेश सचिव विजय शेखर गोखलले संयुक्त राष्ट्र संघका सुरक्षा परिषद्का प्रमुख स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स र रुसलगायतका दिल्लीस्थित दूतहरुसँग जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा चालिएको कदमका बारेमा छलफल गरेका थिए ।
त्यसैगरी मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीहरुले पनि अरु मुलुकका प्रतिनिधिलाई पनि भेटेको भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
त्यस क्रममा भारतीय अधिकारीहरुले सरकारको यो निर्णय आन्तरिक भएको र यसका पछाडि जम्मु–कस्मिर क्षेत्रमा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बताएका थिए ।
पछिल्लो समय अमेरिकाले जम्मु–कश्मीरको विशेषमा चासो देखाउँदै आएको छ ।
उत्तर कोरियाले फेरि दुई वटा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेपछि अमेरिकालाई तनाव
एजेन्सी । उत्तर कोरियाले पुनः दुई वटा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको छ । दक्षिणी हवाङ्गहाइ ...
ओसामा बिन लादेनका छोरा हम्जा मारिए !
एजेन्सी । अल–कायदाका संस्थापक ओसामा बिन लादेनका छोरा हम्जा बिन लादेनकोे को मृत्यु भएको ...
सेनाको विमान घरमाथि खस्दा १७ जनाको मृत्यु, १२ घाइते
एजेन्सी । पाकिस्तानको रावलपिण्डीनजिकै सेनाको एउटा सानो विमान दुर्घटना हुंदा कम्तिमा १७ ...
मुम्बइ डुवानमाः रेलभित्र फसेका १ हजारभन्दा बढी यात्रुको उद्धार
एजेन्सी । लगातारको भारी वर्षाका कारण भारतको मुम्बई शहरका अधिकांश स्थान डुवानमा परेका छन् ...
नवनियुक्त बेलायती प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीमन्डलमा ब्रेक्जिट पक्षधरलाई प्राथमिकता
एजेन्सी । नवनियुक्त बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ब्रेक्जिट पक्षधर नेताहरुलाई सामेल ...
बोरिस जोन्सनले बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री, टेरिजा मेले राजीनामा बुझाउँदै
एजेन्सी । सत्तारुढ दल कन्जरर्भेटिभ पार्टीको नेता चयन भएका बोरिस जोन्सनले आज बेलायती ...
पाकिस्तानकै सूचनामा बिन लादेन मारिएको इमरान खानको खुलाशा
वासिङ्टन । अमेरिका भ्रमणमा रहेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आतंकवादी संगठन ...
चन्द्रमामा मानिस पुगेको ५० औं वर्षगाँठः नासाले भिडियो देखायो
एजेन्सी। चन्द्रमामा मानिसले पहिलो पटक पाइला टेकेको ५० औँ वर्षगाँठ विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम ...
‘मुम्बई हमला’ का योजनाकार गिरफ्तार
एजेन्सी । भारतको मुम्बईमा भएको आतंकवादी हमलाका मुख्य योजनाकार भनिएका हाफिज सईदलाई पाकिस्तान ...
महाकाली नदीमा पानीको बहाव उच्च, भीमदत्तनगर डुवानमा